❤️ Instagram မှာ တင်ဖို့ ဘယ်အချိန်က အကောင်းဆုံးလဲ။ ? - Winches ကလပ်
Instagram တွင်တင်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်သည်မည်သည့်အချိန်ဖြစ်သည် ?
မင်းကမင်းရဲ့စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးအဆင့်တွေကိုမြှင့်တင်ဖို့နဲ့မင်းရဲ့ဖောက်သည်အရေအတွက်ကိုတိုးဖို့ကြိုးစားနေတယ်, မင်းရဲ့ပို့စ်တွေကအချိန်တိုင်းမှာအများဆုံးအာရုံစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်သင့်တယ်. သင်၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုမြှင့်တင်ရန်သင်လုပ်နိုင်သောအရာများစွာရှိသည်။, သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ကဏ္inတွင်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်:
သူတို့ကိုပစ်မှတ်ထား hashtags များ နာမည်ကြီး
ဇီဝတစ်ခုရေးပါ အင်စတာဂရမ် မှတ်သားစရာ
တစ်ခုဖန်တီးပါ အနုပညာ ထင်ရှားပေါ်လွင်စေရန်
ဒါကမင်းရဲ့ပို့စ်ကိုလူပိုမြင်နိုင်ရုံတင်မကဘူး။, ဒါပေမယ့်လည်းသုံးစွဲနိုင်မှုနှင့်မျှဝေသုံးစွဲနိုင်မှုအလားအလာကိုမြှင့်တင်ရန်လည်းဖြစ်သည်. ဤစစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောအချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်. ဒါကြောင့် Instagram မှာမင်းရဲ့ post ကိုဖြန့်ချိဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်စလိုက်ကြပါစို့။.
Instagram တွင် post တင်ရန်ကောင်းသောအချိန်ရှိပါသလား ?
တိုတိုပြောရရင်, Instagram အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတက်ကြွဆုံးဖြစ်သည့်နေ့များနှင့်အချိန်များရှိပုံပေါ်သည်. CST တွင် Instagram ၏အလုံးစုံပါဝင်ပတ်သက်မှုအဆင့်များကိုပြသောဤဂရပ်ကိုကြည့်ပါ : (CST သည် GMT ထက်5နာရီနောက်ကျသည်။)
ဤဇယားသည် Instagram တွင်တင်ရန်အကောင်းဆုံးနေ့ရက်များကိုပြသည်:
ပြီးတော့ Instagram မှာတင်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်တွေဆိုတာငါတို့မြင်နိုင်တယ်:
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 11 နာရီ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နေ့လည် ၁ နာရီ
သောကြာနေ့ မနက် ၉ နာရီ
သောကြာနေ့ မနက် ၁၀ နာရီ
နေ့စဉ် မနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအထိ။
Time Zones တွေအကြောင်း ?
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်တင်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ရွေးချယ်ရာတွင်အချိန်ဇုန်များသည်အဆုံးအဖြတ်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်. မင်းရဲ့ပရိသတ်အများစုကနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်, ဒီလူတွေရဲ့အလုပ်ခန့်မယ့်အချိန်ဇယားတွေပြည့်မီဖို့မင်းရဲ့တင်ရေးဗျူဟာကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စဉ်းစားသင့်တယ်.
မင်းကဗြိတိန်မှာရှိနေရင်မင်းရဲ့အကြောင်းအရာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါကလူတွေအများကြီးရှိနေတာပဲ။, အထက်ဖော်ပြပါဇယားကို အသုံးပြုပြီး အကောင်းဆုံးအချိန်များတွင်5နာရီထည့်သင့်သည်။.
ဥပမာ, မင်း UK မှာရှိနေရင်မင်းရဲ့အကြောင်းအရာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါကလူတွေအများကြီးရှိတယ်, အထက်ဖော်ပြပါ ဂရပ်ဖစ်ကို အသုံးပြုပြီး အကောင်းဆုံးအချိန်များတွင်5နာရီထည့်သင့်သည်။ :
သင်ချီကာဂို၌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက် ၁၁ နာရီကိုအချိန်ဖြုန်းလိုလျှင်, ညနေ ၄ နာရီတွင် UK ၌ဤနေရာကိုတင်ရမည်.
သင်ကအချိန်ဇုန်နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်ထိချင်ရင်, ခြားနားချက်ကို ပိုင်းခြားစဉ်းစားပြီး နေ့လည်2နာရီတွင် ပို့စ်တင်ခြင်းဖြင့် UK ၏နောက်ဆုံးထွက်ရှိမှုကို ဖမ်းယူပါ။, အမေရိကားမှာ ကတိကဝတ်ကောင်းတွေရဖို့အတွက် မနက် ၉ နာရီကနေစတယ်။.
၏အိမ်၌ IBF, ငါတို့ကမင်းအဲဒါကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘဲဘူတာတွေရဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုစီစဉ်သတ်မှတ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အရမ်းကောင်းတဲ့ပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက်ကိုငါတို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းမှာပေါင်းစည်းလိုက်ပြီ.
သင့်မှာ Instagram စီးပွားရေးအကောင့်ရှိရင်, Instagram သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထိတွေ့မှုအတိုင်းအတာကို Instagram Insights ဖြင့်ကြည့်ရန်လွယ်ကူစေသည်. Instagram Insights သည်သင့်အကောင့်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများပေးသည်, နားလည်ရန် ရိုးရှင်းပြီး ဝင်ရောက်ရန် လွယ်ကူသည်။:
သုံးစွဲခွင့် သင့်ပရိုဖိုင်ပုံ၏ ညာဘက်အောက်ခြေရှိ အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် သင့်အကောင့်စာမျက်နှာသို့ ရောက်ရှိပါ။
စာနယ်ဇင်း menu ပေါ်မှာ “ဟမ်ဘာဂါ” ညာဘက်အပေါ်
ထိပါ။ ၎င်းဘေးရှိ ဘားဇယားပါသော Insights ရွေးချယ်မှု
အကြောင်းအရာစာရင်းဇယားမှ လှုပ်ရှားမှုဒေတာနှင့် ပရိသတ်တိုင်းတာမှုများသို့ ပြောင်းနိုင်သည်။.
ဒီဂရပ်တွေနဲ့, သင့်ပရိသတ်များ မည်ကဲ့သို့ ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သင်ရနိုင်သည်။, ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာမှာလဲ.
ဒီအကောင့်အတွက်အဲဒါကိုငါတို့မြင်နိုင်တယ်, တနင်္လာနေ့နှင့်ဗုဒ္ဓဟူးတို့သည် profile တိုးတက်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးနေ့များဖြစ်သည်, ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်ဇယားနှင့်အညီဖြစ်သည်. အကောင်းဆုံးနေရာတွေကိုလည်းငါတို့မြင်နိုင်တယ်, အချိန်ဇုန်များနှင့်ထုတ်ဝေမှုအချိန်တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါသိရန်ကောင်းသောသတင်းအချက်အလတ်ဖြစ်သည်.
ဒီသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူ, စေ့စပ်မှုအဆင့်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရန် display အတွက်မင်းရဲ့အတိအကျ drop point ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သင့်တယ်.
သင်၏ Instagram ပို့စ်များကိုပိုကောင်းအောင်စတင်ပါ
သင်သည်သင်၏အကောင့်ကိုအမှန်တကယ်တိုးပွားစေလိုလျှင်၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအဆင့်များကိုရယူပါ, မင်းဒီစနစ်တွေကိုမင်းအကျိုးရှိအောင်သုံးရမယ်. Instagram အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏အကောင့်ကြီးထွားမှုအတွက်အသုံးဝင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့်သူတို့၏အကောင့်အကြောင်းအခြားအချက်အလက်များအားကြည့်ခွင့်ပြုသောအခြား third-party applications များလည်းရှိသည်။.
လူမှုရေးစောင့်ကြည့် မင်းရဲ့ပရိသတ်ကိုပိုပြီးနားလည်နိုင်ဖို့နဲ့မင်းရဲ့အကောင့်တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံနိုင်အောင်ရိုးရှင်းပြီးလေးနက်တဲ့အချက်အလက်တွေပံ့ပိုးပေးတယ်. သူတို့ကလောလောဆယ်အခမဲ့အစမ်းလုပ်နေတယ်, ထို့ကြောင့်စာရင်းသွင်းပြီးယခုစတင်ပါ. မင်းငါတို့နဲ့အဲဒါကိုပေါင်းစပ်နိုင်တယ် အဆင့်မြင့်အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်ဆော့ဝဲ သင်၏အကောင့်တွင်ဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးသောထိတွေ့မှုရရှိရန်အကောင်းဆုံးအချိန်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများကိုစီစဉ်ပါ.
ယခင်ဆောင်းပါးInstagram ကငါ့ကိုဝင်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး : ပြုပြင်လမ်းညွှန်